Ndeupi musiyano uripo pakati pemushandi wezvemagariro nemushandi wemagariro? | Kuumbwa uye kudzidza
Ndeupi musiyano uripo pakati pemushandi wezvemagariro nemushandi wemagariro?
Maite Nicuesa | 21/05/2021 23:05 | Matipi
Kune akasiyana profiles ehunyanzvi anoshanda mu chinzvimbo munharaunda, ipai rutsigiro kuvanhu vari mumatambudziko. Nekudaro, kune mamwe ma profiles ayo, kunyangwe ivo vachivandudza basa ravo mundima imwechete, dzakasiyana mumatanho akakosha.
Seizvo izwi racho pacharo rinoratidza, pfungwa yemushandi wezvevanhu inoreva rubatsiro Iyi ndiyo nzira inotorwa mukuitwa kweiri basa. Rubatsiro runova nzira yerubatsiro inoratidza basa iri. Nekudaro, mutauro unoshanduka uye, parizvino, izwi rekuti mushandi wezvemagariro rinoshandiswa zvakanyanya kukoshesa iro basa rinoitwa neiyi mbiri.
1 Nzira dzakasiyana dzekunzwisisa dzinobatsira
2 Chii chinonzi social worker kudzidza?
3 Kubatsira kwekuita munharaunda
Nzira dzakasiyana dzekunzwisisa dzinobatsira
Kazhinji, vese nyanzvi vanoshanda muchikwata, ivo chikamu chemapurojekiti akasiyana ayo anoumbwa nemaprofayiri ekuwedzera. Ivo vese vanowedzera kusvika kuboka revasingaverengeki, sezvo ichocho chokwadi chinogona kusvikwa kubva kune akasiyana maonero. Mushure mekuita kuongororwa kwemamiriro ezvinhu akaomarara, nyanzvi dzinogadzira chirongwa chekupindira kuti vape rutsigiro rwakaringana kune rimwe boka kana munhu mumwe.
Munhu wese ane kodzero nemabasa munharaunda. Nekudaro, kodzero dzemunhu dzinogona kutyorwa sekunge munhu iyeye asingaonekwe. Neichi chikonzero, mushandi wezvemagariro anoshanda kudzivirira mikana yakaenzana nekuti kuenzana uku kwakakoshawo kukushanduka kwevose. Dzimwe nguva kupindira kunoitika semhedzisiro yemamiriro anozivikanwa, ayo anomutsa kudiwa kwerubatsiro. Asi kudzivirira kwakakosha mukusimudzira budiriro yenzanga uye kugara zvakanaka.
Chii chinonzi social worker kudzidza?
Uku ndiko kumwe kwekusiyana kwatingawana nebasa remagariro. Iko hakuna imwe nzira yekufambisa inoita kuti nyanzvi iite basa iri mune yakasarudzika rubatsiro rwekubatsira. Nyanzvi inogona kutevera dhigirii rekuyunivhesiti, asi kune zvakare mukana wekusarudza iyo Vocational Training chirongwa. Izvo zvinofanirwa kuratidzwa izvo mamwe ma profiles anodzidza iyo Degree muSocial Work kuyunivhesiti. Asi Vocational Training, iyo ine nzira yepamusoro inoshanda, inopawo mikana yebasa mundima iyi.
Aya mazwi mushandi wezvemagariro uye wezvemagariro anoratidza chokwadi chimwe chete mukuita kwehupenyu hwezuva nezuva. Muchokwadi, anoshandiswa sekunge iwo akafanana mumutauro wezuva nezuva. Pasina kupokana, chakanyanya kukosha chinhu kuperekedzwa kwevanhu vari mumamiriro enjodzi kana kushupika. Asi mutauro pachawo unoratidza kusiyana kukuru. Maitiro akagamuchirwa nebasa remagariro anotamira kure nehutano chepakutanga kuwedzera kupihwa simba kweavo avo, kuburikidza nerubatsiro urwu, vanowana zvimwe zviwanikwa uye maturusi.
Nenzira iyi, munhu ari kuwana rubatsiro ndiye protagonist wavo wega-wenguva refu maitiro ekuvandudza. Zvichienderana nerutsigiro urwu, vane hunyanzvi hutsva hwekutarisana nemamiriro ezuva nezuva uye nematambudziko.
Kubatsira kwekuita munharaunda
Zvemagariro zviito zvakakosha kusimudzira zvakajairika zvakanaka. Uye masevhisi akasarudzika munzvimbo ino anokurudzira kugara zvakanaka. Naizvozvo, musiyano mukuru pakati pemabasa atinoongorora muchinyorwa chino haugare zvakanyanya mumitoro inotorwa nemushandi wega wega, asi mukushanduka kwemutauro pachawo munhoroondo yese. Shanduko iyo inova iratidziro yeshanduko yemagariro uye kutsva kutsva.
Mushandi wezvemagariro anotungamira uye anoperekedza vanhu kana mhuri. Uye shandisa zviwanikwa zviripo kuti upe rutsigiro urwu. Chero ani zvake anochida anogona kubata mushandi wezvemagariro munharaunda mavo kuti akumbire ruzivo pane imwe nhaurwa. Nekudaro, sekutaura kwatamboita muchinyorwa chino muKudzidzisa uye Zvidzidzo iyo tarisiro yerubatsiro iyi isiri yehupfumi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Matipi » Ndeupi musiyano uripo pakati pemushandi wezvemagariro nemushandi wemagariro?